နတ်သုဒ္ဓါ နဲ့ မလဲနိုင်တဲ့ အရသာ – Hlataw Entertainment
နတ်သုဒ္ဓါ နဲ့ မလဲနိုင်တဲ့ အရသာ
ကျွန်မနာမည်က စန္ဒီ…အသက် က၂၇နှစ်… အင်းစိန်ဈေးထဲမှာ အလှကုန်နဲ့ အဝတ်အထည်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားတယ်လေ… ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ အတွက် စောစောထချက်ပြုတ်ပြီးရင်ရေချိုးရဦးမယ်. .ဪ..စန္ဒီကတစ်ကိုယ်တည်း နေတာလေ… အပျိုလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး..စန္ဒီ အမျိုးသားက သင်္ဘောသားလေ..အဲ့တော့လဲအတန်အသင့်စုမိဆောင်မိလေးရှိခဲ့တာပေါ့.. သိတဲ့အတိုင်းပဲသင်္ဘောသားဆိုတော့အလှအပလဲကြိုက်မိန်းမကြမ်းလဲကြေသပေါ့ရှင်..
.ခေတ်လဲမှီပါ့…စန္ဒီ ကိုလဲယောကျာ်းရပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်အလှပျက်မှာစိုးလို့ ဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း) ကစားခိုင်းခဲ့တယ်သူလဲပြန်လာရင် စန္ဒီ နဲ့အတူတူဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)လိုက်ကစားတယ်လေ..အင်း…ခုဆိုကိုကိုမရှိတော့တာ၆လတောင်ပြည့်တော့မယ်…
.သင်္ဘောသားဆိုတော့လဲပင်လယ်မှာပဲဇာတ်သိမ်းတက်ကျတာပါပဲလေ… ကိုကိုမရှိထဲကညတိုင်းကိုကိုနဲ့အတူတူချစ်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာကိုသတိရမိတယ်..သတိရတိုင်းလဲ ကိုကိုဝယ်ပေးထားတဲ့ တုန်ခါစက် နဲ့ လီးတုနဲ့ပဲစိတ်ဖြေခဲ့ရတာပါပဲကိုကိုနေရာမှာအစားထိုးနိုင်မယ့်သူတော့မရှိတော့ဘူးလေ..
ကိုကိုကသင်္ဘောသားပီပီနိုင်ငံခြားအပြာကာတွေထဲကလိုကြိုးတုပ်လိုးတယ် ကြာပွတ်နဲ့ရိုက်လိုးတယ်တစ်ခါခါဖယောင်းစက်တွေကိုယ်ပေါ်ချပြီးပါလိုးတတ်သေးတယ်အစပိုင်းတော့ စန္ဒီ လဲမခံနိုင်ပေမယ့်အကျင့်ရလာတော့အဲ့လိုမှမလုပ်ရရင် စန္ဒီ စိတ်အာသာကမပြေတော့ဘူး တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲ ဪတစ်ခြားသူနဲ့နေဘူးလားဆိုတော့…
ဟိသင်္ဘောသားကတော်ပီသအောင်တစ်ခါတော့ကြေးစားကောင်လေးနဲ့ဆက်ဆံဘူးတယ်လေ ကြေးစားပီပီအလိုးအမှုတ်ကျွမ်းကျင်ပေမယ့် ကျမစိတ်ထဲမှာအာသာမပြေတာနဲ့နောက်မနေဖြစ်တော့ဘူးခုထိကိုကိုမရှိတော့ပေမယ့် ဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)ကစားတာတော့မပျက်ခဲ့ဘူး..
အာ့ကြောင့်လဲ စန္ဒီ ခန္ဓာကိုယ်ကမြင်တဲ့ယောကျာ်းတိုင်း၂ခါပြန်ငေးရအောင်စွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်လေ.. ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့စူပါအကိတ်ပေါ့ရှင်….အာ.. မနက်ကကိုကို့အကြောင်တွေးရင်လွမ်းရင်းထွက်လာမိတာ ဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)ကစားဖို့ဝတ်စုံထည့်ထားတဲ့အိပ်အိမ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ…. ဆိုင်မှာလဲဈေးဝယ်သူပါးလို့အရင်ကကိုကိုနဲ့ချစ်ရည်လူးခဲ့တာပြန်တွေးရင်ခွကြားလေးမှာစိုတိုတိုနဲ့.. အိမ်ပြန်ပြီဝတ်စုံယူရင်လဲကားပိတ်တာနဲ့ဆိုအသွားအပြန်၁နာရီခွဲလောက်ကြာဦးမယ်.. ဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)ကလဲကစားနေကြဆိုတော့မကစားပဲမနေနိုင်တာနဲ့ဒီနေ့ဝတ်လာတဲ့ထမီအပြာအင်္ကျီလက်ပြတ် အဖြူပေါ်မှာရောင်စုံအစက်အပေါ်ကပန်းရောင်လက်ပြက်လေထပ်ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲပေါက်တောဝက စန္ဒီ ကစားနေကြ ……..ဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)ကိုလာခဲ့မိတယ်…
ဝတ်စုံမပါတော့အပေါ့စားလေးတွေပဲလုပ်ပြီးပြန်မယ်ပေါ့ ဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)ခန်ထဲရောက်တော့ကစားလက်စ၂ယောက်ရှိသေးတယ် စန္ဒီ ရောက်ပြီးခဏထိုင်အကြောလေိာ့နေတုန်းပဲသူတို့လဲပြန်သွားကြတယ်ဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)ခန်းမတစ်ခုလုံးမှာ စန္ဒီနဲ့နည်ပြဆရာ၂ယောက်ရယ်၃ယောက်ထဲရှိတော့တယ်.. သူတို့ကလဲ၂ယောက်လုံးကဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)ကစားလက်စမို့လားနည်းပြရတာ ရှယ်ပုံစံ ကျအောင်လားမသိကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာအောက်ကအတွင်ခံလေးတွေနဲ့..အာနဲ့ စန္ဒီ လဲစိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီဖြစ်လာလို့ပြန်မလို့လုပ်နေတုန်း…တစ်ယောက်- ဟာ စန္ဒီ ပြန်တော့မလို့လာ မကစားတော့ဘူးလား-ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝတ်စုံလဲမပါဘူး ပြီတော့ကစားရမှာလဲစိတ်မပါလို့ပြန်တော့မယ်-စန္ဒီရယ်ဝတ်စုံနဲ့ကနေ့တိုင်းကစားနေကြပဲဟာ တစ်ခါတစ်လေအသစအဆန်းဖြစ်အောင်ထမီလေးနဲ့ကစားကြည့်ပါလား -နေပါစေတော့ဆရာရယ်နောက်နေ့မှပဲကစားတော့မယ်
အဲ့အချိန်မှာပဲဘေးကတစ်ယောက်ကဝင်ပြီ-စန္ဒီ ရယ်ဝတ်စုံနဲ့ကလူတိုင်းလာကစားနေကြ စန္ဒီ လဲကစားနေကြမို့ဆရာတို့လဲမြင်ရတာရိုးနေပြီအသစ်အဆန်လေးမြင်ဖူးတယ်ရှိအောင် ဒီတိုင်းထမီလေးနဲ့ပဲကစားကြည့်ပါလား ဆရာတို့လဲ လိုအပ်ရင်ကူပေးမှာပေါ့ကျမလဲငြင်းရမှာအားနာလာတာနဲ့ပဲ-အင်းလေဆရာတို့ကလဲတောင်းဆိုနေတော့ကျမလဲကစားကြည့်တာပေါ့… လို့ဖြေပြီးအပေါ်ထပ်လေးကိုချွတ်ထမီကိုခြေသလုံးအလည်လောက်ပြင်ဝတ်ပြီ
အပြေးစက်မှာစပြီးပြေးကြည့်လိုက်တယ် တစ်ယောက်ကကျမနောက်ကတစ်ယောက်ကအရှေ့ကနေလာရပ်ကြည့်နေတယ်အရှေ့ကတစ်ယောက်က ကျမပြေးလိုက်တိုင်တုန်တုန်နေတဲ့ရင်သားတွေကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်နောက်ကတစ်ယောက်ကလဲ ကျမရဲ့တင်သားတွေနိမ့်တုံမြင့်တုန်လှုပ်ရှားနေတာကိုကြည့်ပြီး ပြစ်မှား နေတာအသေအချာပြောနိုင်တယ်..
.ရှေ့ကတစ်ယောက်ကတစ်ကိုယ်လုံးမှာအတွင်ခံတစ်ထည်ထဲနဲ့ဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)ကစားလို့အချိုးကျကျကြည့်ကောင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးအဆတ်အပေါက်ကိုကျမမြင်နေရတယ်.. ဖိုဓာတ်နဲ့ကင်တာကြာနေတဲ့ကျမစိတ်ထဲလဲမရိုးမရွလေးဖြစ်လို့ပေါ့…ပိုဆိုးတာက သူုအတွင်းခံထဲကညီမောင်က ကျမကိုကြည့်နေရင်းရှေ့ကိုပိုဖုဖောင်းလာပြီး အမြောင်းလိုက်ကြီးထင်းထင်းကြီးပေါ်လာတော့ငုတ်နေတဲ့ကာမစိတ်တွေလဲကြွလာမိတယ်.. ကျမဂွကြားလေးမှာတောင်စိုတိုတိုနဲ့အဖုတ်ထဲကယားသလိုဖြစ်လာမိတယ် ကျမလဲသူ့ပေါင်ကြားထဲကမျက်စိကိုမခွါနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာ
နောက်ကတစ်ယောက်ကဂျင် (လေ့ကျင့်ခန်း)ခန်းအဝင်တံခါးကိုပိတ်လိုက်တာတောင် မသိလိုက်မိဘူး လက်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် စပရိန် ကိုဆွဲတော့လဲတစ်ယောက်ထိန်းပေးသလိုနဲ့နောက်ကျောကနေ သူ့အချောင်ကြီးလာလာကပ်တာခံရတော့ကျမမှာကာမစိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းတက်တက်လာပြီ လူလဲထူပူလာမိတယ်ဘေကရပ်ကြည့်နေတဲ့တစ်ယောက်ကိုလဲ စပရိန် ကိုဆွဲလိုက်တိုင်လက်မောင်းသားကသူအချောင်နဲ့သွားပြီပွတ်မိနေတာပေါ့ရှင်… သူတို့လဲအပေါ်စီကနေရင်သားတွေကြည့်ရင်းကျမကိုယ်လုံးတွေလက်မောင်သားတွေနဲ့ထိမိရင် လိင်တံချောင်တွေကရာနှုန်းပြည့်မာတင်းလာတာအထိအတွေ့နဲကျမသိနေမိတယ် ကျမလဲအဲ့လိင်တံတွေ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိသာစုပ်ပေးချင်စိတ်ပေါ်လာပြီးဆက်ပြီမကစားနိုင်တော့ဘူး.. ကာမဒီရေတွေတိုးသထက်တိုးလာပြီးလူတစ်ကိုယ်လုံးလဲထူပူနေပြီ..
အသ်ိစိတ်နဲ့လူနဲ့သိပ်မကပ်ချင်တော့ဘူးလေ….. မိန်းမကြမ်းကြေနေတဲ့ဆရာ၂ယောက်ကလဲကျမစိတ်ပါလာပြီဆိုတာ သိတာနဲ့အပြောအဆိုတွေအထိအကိုင်တွေက ပိုရဲတင်းလာတော့တယ်.. .နောက်ကတစ်ယောက်-စန္ဒီ တင်သားတွေကအရမ်းလှတာပဲနော်တင်လိမ်ကွင်းကစားသလိုစကောဝိုင်းလေးကစားကြည့်ပါလား ကျမလဲဆေးမိနေသူလိုသူပြောသလို တင်ပါးတွေကိုပစ်ခါစကောဝိုင်းရင်းသူပြောသလိုလိုက်လုပ်နေမိတယ်ရှေ့ကတစ်ယောက်ကလဲ ဆံပင်တွေကိုသပ်တင်ပေး နဖူးကချွေးတွေမျက်နှာကချွေးတွေသုတ်ပေးရင်သွေးတိုးစမ်းလာတယ်.. ကျမလဲင်မ်ြနေတော့လည်ပင်းနဲ့ရင်သားပေါ်ကချွေးတွေပါသုတ်ပေးရင်း ရင်သားကိုမထိတထိနဲ့ကိုင်တွယ်ပွတ်သတ်ပေးလာတယ်.. သူ့အပွတ်အသတ်အကိုင်အတွယ်မှာပဲကျမရဲ့စိတ်တွေထိန်မရတော့ပဲ သူတို့၂ယောက်ဝိုင်းလိုးတာကိုခံချင်လာမိနေတယ်….
ကဲလာ စန္ဒီ ဘယ်ရီရိုက်ဦးမယ်….ဆိုပြီးဘယ်ရီခုံပေါ်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့နောက်ပါသွားမိတယ်.. ကျမဟာဘယ်ရီခုံပေါ်မှာပက်လက်အနေအထားနဲ့သူတို့လုပ်သမျှခံဖို့အသင့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်……. တစ်ယောက်ကကျမခေါင်နားမှာကျမလက်ကိုကိုင်ထားပြီးရပ်နေတယ် တစ်ယောက်ကကျမခြေထောက်တွေကိုခုံမှာနေသားတကျ ဖြစ်အောင်ထားပေးလို့ပေါ့…….ကျမလဲဘယ်ရီရိုက်ဖို့အားကမရှိသလိုဖြစ်ပြီးလူကမထနိုင်ဖြစ်နေတယ်.. .အောက်ကတစ်ယောက်ထမီကတုပ်နေတာဆိုပြီးထမီကိုပေါင်လည်ရောက်အောင်ဆွဲမတင်လိုက်တယ်.. .သေချာပြီကျမအတွင်းခံကိုသူမြင်ရပြီ.. ဒါဆိုရင်အတွင်ခံကပန်နုရောင်လေးဆိုတော့အဖုတ်ကထွက်တဲ့ အရည်တွေစိုစွတ်နေတာသူမြင်မှာပဲဆိုတဲ့အသ်နဲ့မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ပြီးနှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ထားလိုက်မိတယ်…… ကျမအခြေအနေသိတဲ့အပေါ်ကတစ်ယောက်ကလဲ ကျမလက်တွေကိုသူ့လီးပေါ်ကိုတင်ကိုင်ခိုင်းပြီဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေတယ်.. .အောက်ကတစ်ယောက်ကလဲခြေဖဝါးကနေစပြီးပေါင်ရင်သားအထိပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပေးနေတယ်…
ဒီအချိန်မှာသူတို့လုပ်သမျှကိုမငြင်းဆန်နိုင်ပဲသူ့တို့အပြုအစုအောက်မှာသာယာနေရင်း ကာမမီးတွေကိုလောင်စာအိုးကျသလိုငြိမ်းမရတော့ဘူးပေါ့ရှင်… အပေါ်ကလူကအတွင်ခံကိုချွတ်ပြီသူ့လီးကိုကိုင်းခိုင်းထာတာကိုအလိုက်သင့်အထက်အောက်လျော တိုက်ဂွင်းထုပေးရင် အောက်ကနှိုက်ဆွပွတ်သပ်ရလွယ်အောင်ပေါင်ကိုလဲအလိုက်သင့်ကားပေးထားလိုက်တယ်…. အပေါ်ကလူကကျမအင်္ကျီကိုဆွဲချပြီးနို့၂လုံးကိုအားရပါရစုပ်ကိုင်ကစားနေတယ်….. သူရှေ့ကုန်းပြီနို့ကိုင်လိုက်တော့သူ့လီးကကျမမျက်နှာနဲ့တစ်တန်းထဲပေါ့ရှင်…. .အောက်ကလူကလဲပင်တီပေါ်ကနေစောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုပွတ်ပေးနေရကအားမရလို့ပင်တီကို ဆွဲချွတ်တဲ့အခါကျမလဲအလိုက်သင့်တင်ပါးကိုကြွပေးလိုက်မိတယ်…. ..အပေါ်ကလူကလဲနို့တွေကိုင်ရင်ကျွန်မနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းလာတယ်…
ကျမလဲသူ့လျှာထိုးထည့်လာတာကိုအလိုက်သင့်ပြန်ပြီနမ်းရင်နဲ့…. .အောက်ကလူကအဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုဖြဲအစိလေးကိုလက်နဲ့ချေပေးတဲ့အခါ ကျမရဲ့အနမ်တွေဟာပြင်းထန်အားပါလာရတယ်.. .အောက်ကလူကဖိချေလေအဖုတ်ထဲကယားပြီတွန့်ခါလေ… အပေါ်ကနမ်းလေနဲ့ကျမအဖို့ကာမခံစားမှုအသစ်အစမ်းမှာအကောင်းကြီးကောင်နေပါတော့တယ်… .အောက်ကလူကကျမစောက်ဖုတ်လေးကိုလျှာနဲ့အပြာလိုက်လျက်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာပဲအပေါ်ကလူကနမ်းနေတာကိုရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ပြီး ကျမနှုတ်ခမ်းဝမှာသူ့လီးကိုလာတည်ပေးထားတယ်….
ကျမလဲအလိုက်တသိနဲ့သူလီးဒစ်ဖျားကိုလျှာနဲ့ထိုးကလိရင်း လီးတစ်ချောင်လုံးကိုစိတ်ပါလက်ပါစုပ်ပေးနေမိတယ်… .အောက်ကလူကအစိလေးကိုလျှာနဲ့ထိုးလိုက်လုပ်နေတဲ့အခါ အထဲကအလွန်အမင်ယားလာပြီးမနေနိုင်လို့လိုးပေးကျဖို့တောင်ဆိုလိုက်မိတဲ့အထိပါပဲ….. .အောက်ကလူကလီးကိုလိုးအပေါ်ကလူကနို့နှလုံးကြားကိုလိုးပေးကြတယ်…. ၅မိနစ်လောက်ကြာတော့အပေါ်ကလူကကျမနေရာမှာအိပ်ပြီကျမကိုအပေါ်ကတက်ဆောင့်လိုးခိုင်းတယ်….. ကျမလဲသူတို့၂ယောက်အလိုးအမှုတ်နဲ့၂ခါလောက်ပြီးခဲ့ရပြီ…. အဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ကတစ်ယောက်ကကျမဖင်ပေါက်ဝကို လက်နဲ့ဆွတံတွေးဆွတ်ပြီးသူ့လီးကိုဖင်ထဲစလိုးပါတော့တယ်….. ကိုကိုရှိစဉ်ကဖင်ရောစောက်ဖုတ်ရောအလိုးခံရဖူးပေမယ့် ခုလို၂ယောက်ကတစ်ပြိင်ထဲလိုးတာခံစားလိုက်ရတယ်ကျမဟာ ဒီအရသာကိုအစွဲကြီးစွဲမိပြီပေါ့…..
ပါးစပ်ကလဲအား…..အား….အင်း…….အင်….ငြီိးရင်း… ၂ယောက်ကလဲတင်းဆောင့်လိုးကြရင်းနဲ့ကျမအတွက် ကာမသုခတွေပြည့်ဝချင်တိုင်ပြည့်ဝလို့နောက်ထပ်၂ခါလောက်ထပ်ပြီးခဲ့ရပေါ့…. သူတို့၂ယောက်ကလဲပြီးခါနီးပြီးခါနီးကို၂ယောက်လုံးပါးစပ်ဝမှာလီကို ဂွင်းထုပြီးကျမပါးစပ်ထဲလရည်တွေပန်ထည့်ပေးကြတယ်… ကိုကိုမရှိထဲကလရည်မသောက်ခဲ့ရတဲ့ကျမအတွက်နတ်သုဒ္ဓါနဲ့မလဲနိုင်တဲ့အရသာပါပဲ…. ကျမအတွက်လဲလိုအပ်နေတဲ့ကာမစည်းစိမ်ကိုသူတို့၂ယောက်နဲ့အတူအပြည့်အဝခံစားခွင့်ရခဲ့ပါပြီ…. အဲ့နေ့ကစပြီးကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကျမအိမ်မှာချိန်းလိုးခဲ့ကြတာခုထိပါပဲရှင်။ ပြီးပါပြီ
သက်ထား ရှာ နဲ့ လာစေး လှည့်ပေါ့